Orange Money : efa miasa eny amin’ireo “stations-services” | NewsMada
Orange Money : efa miasa eny amin’ireo “stations-services”
Manamora hatrany ny fikirakiram-bola. Fantatra izao fa efa miasa eny amin’ireo “stations-services” na ny toby fivarotan-tsolika miisa 60 manerana ny Nosy ny Orange Money. Afaka mandoa ny solika, menaka, saran’ny fikarakarana sy ny fanasana ny fiara ka hatramin’ny fividianana entana ao amin’ny botika, amin’ny alalan’ny Orange Money ny mpanjifa. Tsy vitan’izay fa afaka manao petra-bola na maka vola eny amin’ireny “stations-services ireny koa” ireo mpampiasa ny Orange Money.
Efa mihatra ny tolotra eny amin’ireo fivarotan-tsolika Total, Galana ary Jovenna. Tsy ho ela kosa dia hisy ny eny amin’ny Shell, raha ny fanambarana. Mora amin’ireo mpanjifa rahateo ny mamantatra ny fivarotan-tsolika misy ny tolotra, satria tsy maintsy misy ny famantarana ny Orange Money eny.
Mazava loatra fa tanjona hatrany ny hanakaiky kokoa ny mpanjifa. Anisan’ny toerana hikirakirana lelavola be indrindra ny toeram-pivarotana solika, ka sady manamora izany no mampitombo ny fandriampahalemana ihany koa ny fampiasana ny fifanakalozana amin’ny alalan’ny finday. Efa nihoaran’ny Orange Money, araka izany, ny maha tolotra fandefasana na fandraisana vola fotsiny azy. Efa fitaovana ilaina amin’ny fifanakalozana ara-barotra mihitsy ny tolotra, izay mivoatra hatrany manaraka ny filan’ny mpanjifa.